काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक धरापमा परिणत
समितिको आजको बैठकले नियमित रुपमा हुनुपर्ने मर्मत सम्भार हुन नसकेको, सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसकेको तथा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम नगरेको भन्दै किन त्यस्तो भएको हो ? समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ ? किन कमजोरी भएको हो ? कति समयभित्र मर्मत हुन सक्छ ? लगायत जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
उनले निर्माण व्यावसायीका तर्फबाट हुने कमजोरी हटाउन सरकारले विशेष पहल गरेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवले नै आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बताए ।